"(Hoy Jesosy:) Ary ireny valo ambin’ny folo ireny, izay nianjeran’ny tilikambo tao Siloama ka maty, ataonareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema ireny ? Tsia, hoy Izaho aminareo ; fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra." Lioka 13:4-5
Iza moa no tsy efa nitroatra, na dia ao anaty ihany aza, manoloana ny tsy rariny maro mitranga eto amin’izao tontolo izao? Iza no tsy tonga saina mahita ireo fijaliana marobe, ara-batana na ara-toe-panahy?
Ambaran’ny Baiboly antsika fa ny antony voalohany mahatonga ny zava-dratsy manjo ny olombelona, dia ilay antsoina hoe ota. Tamin’ny alalany no nidiran’ny fahafatesana teto amin’izao tontolo izao.
Marina fa ny ankamaroan’ny loza mitranga dia tsy vokatry ny fahotana iray voafaritra, nefa dia mahakasika ny tsy manan-tsiny sy ny meloka. Saingy ny loza manjo ny olona sasany dia matetika fampitandremana ho an’ny hafa. Ny loza etsy, ny fahafatesana tampoka eroa, dia mampahatsiaro ahy fa mety ho izaho no hiharan’izany rahampitso, mety ho foana tampoka ny fikasako, mety ho potika ireo zavatra na olona tiako. Tian’Andriamanitra ho matotra sy hifantoka isika, tiany hametraka ireo fanontaniana fototra: Nahoana aho no eto an-tany? Inona no aorianan’ny fahafatesana? Tsy hampamoahina ny amin’ny fiainako ve aho, indray andro any? Tsy ny fahafatesana tokoa mantsy no loza indrindra, ho an’ny tsy mino, fa izay aorianan’izany, dia ny fitsarana.
Aoka ianao tsy hitroatra ; aza miampanga Ilay Mpahary, fa tsarovy ny fitiavany. Nokapohiny Ilay Zanany tsy manan-tsiny, ho solontsika olo-meloka, dia izaho sy ianao. Ary andrasany am-paharetana ny olona tsirairay hiantso Azy, mba hovonjena. Tsy te hanao izany ve ianao, izao ankehitriny izao?